WOWOW 2 Hifehy fandroana an-dakozia miaraka amin'ny vovo-menaka entona manosika amin'ny sisiny
Home / Fitaovana an-dakozia / Sintomy ny fako an-dakozia / WOWOW 2 Faucet ao an-dakozia misy alimo famafazana menaka manify
Ny rafiny mateza sy matanjaka dia manome antoka fa tsy mora tapahina ny paompy an-dakozia.
Ny fitaovana vy sy varahina manokana dia mahatonga azy hiatrika hafanana.
Amin'ny maha-mpanampy tsara sy ilaina tsy misy aina azy, ny famatsiana fantsom-bokatra amin'ny lakozia dia ampiasain'ny olona amin'ny fiainany andavanandro.
tsy misy firaka, fananganana vy vy 304 miaraka amina be dia be ho an'ny famenoana fitoeran-tsolika, varahina miendrika solika dia manana tanjaka sy fiaretana ao anatin'ity boaty lakozia ity 23118A4RB
Ny kirihitra ao an-dakozia amin'ny alàlan'ny famafazana dia mety mihodina ny safidy mari-pahaizana 360 hahatratra ny sisin'ny lalandrano, mpanefy sisiny 35 santimetatra hanadiovana ny lovia na lovia lava kokoa.
Voaroy baoty natsimo nopotehina tamin'ny baomba roa mba hifehezana mora foana ny fahatongavan'ireo rano mafana sy mangatsiaka. Ny valva volam-bary seramikaly dia manome antoka mandritra ny androm-piainan'ny fanamboarana malefaka sy fampandehanana drp
4-hole 8 santimetatra fanamboarana, fampifanarahana fanaingoana dia mihodina amin'ny granita mpanisa na ny mason-tsofina manidina.
Ampahany : 23118A4RB Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Sintomy ny fako an-dakozia Tags: Volon-tsolika voahosotra menaka, side Sprayer
diloilo ny menaka manitra